संक्रमित बढ्न थालेपछि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको विवरण संकलन – Nepal Japan
संक्रमित बढ्न थालेपछि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको विवरण संकलन
नेपाल जापान ११ चैत्र २२:३७
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीब्रगतिमा फैलन थालेपछि नेपालमा पनि पर्ने भएकाले यसको तयारीका लागि सरकारले पुनः गृहकार्य सुरु गरेको छ । केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना संक्रमण फैलिनसक्ने भएकाले भिडभाड, सभा, जुलुस नगर्न आह्वान गरेको थियो ।
लामो समयदेखि नेपालमा संक्रमण दर न्यून रहँदै आएकामा केही दिनयतादेखि बढिरहेको छ । यसबीचमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन पुनः आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले देशभरिका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरको अवस्थाबारे विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले ७७ वटै जिल्लाका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरबारे विवरण अपडेट गराउन परिपत्र गरिएको बताउँदै सीमा नाकामा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्न र स्वास्थ्य जाँच गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार पछिल्लो २४ घण्टामा थप १४५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ३९६३ जनामा भएको आरटी पीसीआर परीक्षणमा १४५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । मंगलबार ४०३२ जनामा भएको परीक्षणमा १८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
बुधबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ७६ हजार ३८९ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरेना भाइरस संक्रमणबाट १ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हामीले भुल्न नहुने कुरा के हो भने भारतमा संक्रमण उच्च विन्दुतिर बढिरहँदा नेपालमा पनि संक्रमण बढेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतमा पहिलो लहरमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको एक महिनापछि नेपालमा बढ्यो, दोस्रो लहरमा पनि त्यही अवस्था आउनसक्नेतर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौं विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्य विभागको सहप्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठले यही तथ्यतर्फ जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल, भारतभन्दा एक महिना पछाडि परेको र अहिले भारतमा संक्रमण बढ्दै गरेको तथ्यांकलाई एक ठाउँमा राख्दा हामी के अनुमान गर्न सक्छौं भने नेपालमा पनि अबका केही हप्ता संक्रमणको संख्या बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ ।’
डा. श्रेष्ठले भनेझै नेपालमा दुई अंकमा सीमित भएको दैनिक पहिचान भएका सक्रिय संक्रमितको संख्या तीन अंकमा पुगेको छ । अस्पतालहरुको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गराइरहेको शिक्षण अस्पतालमा गरिने परीक्षणमा संक्रमण दर १८ प्रतिशत पुगेको छ ।